Ronaldo oo ka SHALLAAYAY hadalkii uu xalay yiri kaa oo Wadnaha Jaray Taageerayaasha Real Madrid – Gool FM
Ronaldo oo ka SHALLAAYAY hadalkii uu xalay yiri kaa oo Wadnaha Jaray Taageerayaasha Real Madrid
Byare May 27, 2018
(Kiev) 27 Maajo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa xalay dabaal degii ka qasay taageerayaasha kaddib hadaladii uu yiri kaddib markii ay Real Madrid ku guuleysatay Champions League markii saddexaad oo xiriir ah iyo markeedii 13-aad.
Xiddiga reer Portrugal ayaa sheegay ciyaarta kaddib inay wax aad u fiican ahayd inuu joogo Real Madrid isla markaana uu maalmaha yar ee soo socda uu taageerayaasha jawaab siin doono.
Hadalkii gil gilay taageerayaasha ayuu Ronaldo markii dambe ka shalaayay in waqti farxadeed uu hadalkaasi yiraahdo.
“Waxay naga nusqaamisay waqti qurxoon, waqti taariikhi noo ah innaga taa oo ah inaan ku guuleysanay Champions League markii saddexaad oo xirii ah, sida cad waa waqti gaar ah,” Ronaldo ayaa sidaa u sheegay Fox Sports.
“Had iyo jeer waa wax wayn inaad ku guuleysato Champions League maxaa yeelay waan ogahay sida uu muhiim u yahay tartankan, waxaan qaatay Champions League wayn bilowgii ilaa dhammaadka sidaa darteed aad ayaan u faraxsanahay.
“Waqti xaadirkan muhiim ma ahan waxyaabaha shaqsi ahaaneed ee ciyaaryahanka, waxaa laga yaabaa in micnaha guud laga qaaday, laakiin ma ahayn inaan iraahdo wixii aan iri.”.